Madaxweynaha Hirshabeelle iyo wasiiro ka tirsan Maamulkiisa oo gaaray Beledweyn - Hablaha Media Network
Madaxweynaha Hirshabeelle iyo wasiiro ka tirsan Maamulkiisa oo gaaray Beledweyn
HMN:- Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle Cali C/llaahi Cosoble iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Beledweyn ee Gobolka Hiiraan.
Wafdiga Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa si diiran loogu soo dhoweeyay garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif, iyadoo xubno isugu jiray maamulka gobolka Hiiraan, odayaal, ururada bulshada iyo saraakiil ciidan ay soo dhoweeyeen.
Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa waxaa socdaalkiisa ku wehliya xubno ka tirsan Golaha Wasiirada iyo xildhibaano, waxaana socdaalkooda uu la xiriiraa u kuur gelida xaalada magaalada Beledweyn.
Madaxweyne Cosoble ayaa ugu horeyn warbixin ka dhageystay Maamulka Gobolka Hiiraan, iyo qeybaha kala duwan e bulshada, waxaana uu sheegay in maamulkiisa uu wax ka qaban doono cabashada dadka ku nool gobolka.
Waxaa uu sheegay in maamulka Hirshabeelle uu xarun ka furan doono Beledweyn, si fursado shaqo uga helaan dhalinyarada ka baxday jaamacaha, waxaana uu dadka reer Hiiraan ugu baaqay inay la shaqeeyaan.
Waa socdaalkii u horeeyay ee Madaxweynaha Hirshabeelle uu ku tago Beledweyn, tan iyo markii uu magacaabay Golihiisa Wasiirada.